University of Wollongong ee Dubai - Study in Imaaraadka Carabta
University of Wollongong ee Dubai
University of Wollongong ee Dubai Details
gaabinta : UOWD
aasaasay : 1993
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Wollongong ee Dubai
Qor at University of Wollongong ee Dubai
Ku soo dhawaada Jaamacadda Wollongong ee Dubai (UOWD).
UOWD ku sii dhisnaatay Imaaraadka Carabta ee 1993 by mid ka mid ah jaamacadaha adduunka ee darajayn top, Jaamacadda Wollongong ee Australia. Asal ahaan loo yaqaano Machadka Daraasaadka Australian, UOWD waa firfircoon a, hay'ad firfircoon oo kala duwan, xafidaada Dhaxalka Australian xoog. In ka badan la soo dhaafay 23 sano aan ku adkeeyey rikoor fiican ee waxbaridda qalin aadka u shaqaalayn iyo sumcad caalami ah tayada dhaqanka noo waxbarasho.
Iyadoo in ka badan 4,400 ardayda ka badan 117 dalalka la baray by aqoonyahano ka badan 40 dalalka, UOWD bixiyaa dhaqanka ugu fiican ee waxbarashada galbeedka ee deegaan waxbarasho oo dhab ah dhaqamada.
Waxaannu isku daro haybaddii waxbarasho ee jaamacadda, 12-kii ugu sareeyay ee Australia la dhaqanka iyo reyn ee magaalada magalo ee Dubai, si ay u bixiyaan firfircoon a, jawi dhiirrigelin iyo abaal loogu talagalay ardayda, dhakhaatiirta cilmi-baarista iyo xirfadlayaasha ganacsi si isku mid ah. Isla mar ahaantaana, Annagu waxaannu nahay kuwa door fiican in dhaqaalaha gobanimadoonka aqoonta Imaaraadka Carabta.
hab ardaygu xuddun barashada Our hubisaa in ka qalin ka soo tagaan dunida ku hubaysan ka sii badan intii aqoon farsamo iyo waayo-aragnimo waxbarasho oo fiican galay. Waxa kale oo ay leeyihiin xirfadaha xirfad cilmi, falanqaynta, ganacsi, xalinta dhibaatada iyo isgaarsiinta. Tani waxay marka laga reebo iyaga oo dhigaya ka dhiggooda ah ee guud ahaan hay'adaha kale oo uu sharaxayaa sababta aad u badan oo ka qalin noo hadda ka tirsan, jagooyinka ka masuul oo xiiso leh ee kala duwan oo ka mid ah ururada qiimaha, labadaba UAE iyo adduunka oo dhan.
Tan iyo markii la aasaasay our, waxaan u dhisay sumcad tayada, kalsoonida iyo daacadnimada, iyo University la qabtay marka loo eego sare by ardayda, Qalinjabiyeyaasha, ganacsi, warshadaha iyo dawladda. Waxaan u ilaaliyaan dhaqanka dheer iyo han sare ee waxbarashada weheliso qiyamka deeqsi ah baaritaan, oo si joogto ah u dadaalay si loo siiyo jawi bacrin ah, waayo maskaxda dhallinyarada ah oo dhalaalaya magooliyey, halkaas oo fekerka muhiimka waa labada dhiirigelinayaa oo kobciya; Sifooyinka sifaha machadyada weyn ee waxbarasho.
By dooranaya barnaamij at UOWD aad sameyn doono maalgelin aad u fiican in aad mustaqbalka sida aynu ku Dadaashid fursado waxbarasho ka xiiso badan ardaydeenna.
Sababaha ay u dooran Unitersity of Wollongong ee Dubai:
1. aqoonsiga caalamiga
waxbarasho ku salaysan Australian Tayada aqoonsan yahay caalamka
2. UAE aqoonsi, hubinta tayada Australian
Darajo aqoonsan by Wasaaradda UAE ee Tacliinta Sare iyo Sayniska Research iyo tayada xaqiijiyay by UOW, taas oo ka diiwaan gashan Hay'adda Tayada iyo Standards Tertiary Waxbarashada (TEQSA)
3. degrees Beddeli
Fursadaha si ay u gudbiyaan si UOW Australia ama si aad u hesho a shahaado UOW Australia ka dib markii uu soo dhameystay barnaamijka a at UOW Dubai
4. qalin UOWD yihiin shaqaale ah oo la doortay
rajada shaqo iyo xirfado heer sare dhamaystaan ​​waxbarashada
5. xidhiidhada qiimo leh nolosha
xidhiidhada caalamiga Life-dheer iyada oo loo marayo shabakad Qalinjabiyeyaasha xoog
6. Qiimaha lacag
kharashka waxbarashada iyo nolol la awoodi karo ee la xiriirta Australian, US, barnaamijyada waxbarashada sare Canadian iyo UK
7. geeddi socodka Customer-friendly
ogolaanshaha fududeeyay, habka lacag bixinta iyo fiisada
8. ardayda jinsiyadaha
kala duwanaanta laga qabanin, ee ardayda – deegaan dhab ah dhaqamada la isticmaalayo shabakadaha taageerada dhaqan ballaaran
9. Mid ka mid ah erayga: Dubai!
deegaanka nool Safe iyo amaan ee Dubai iyadoo fursado badan oo horumarka xirfadeed
10. Dhuleed helaan dunida
kalabadhkeeda goobta Central u dhexeeya Europe iyo Asia, iyadoo u dhaw dal ee Indian sub-qaaradda, GCC, gobollada Dhexe-East iyo Waqooyiga Afrika
Engineering iyo Information Sciences
In 1993, ah University of Wollongong ee Australia furay waxa uu ahaa si ay u noqdaan University of Wollongong ee Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Markii hore loo yaqaan Institute of Studies Australian (IAS), Xarunta taas uga dhigay reer UOW jaamacadda ugu horeysay shisheeye in la furo campus ah ee Imaaraadka Carabta, iyo hay'adda ugu horeysay Australian jaamacadda wakiil ee GCC ah. IAS hore bixiyey barnaamijyada luqadda Ingiriisiga, ka hor inta noqoto a 'kulliyadda shekeysan’ by 1995, halkaas oo ardaydu qayb ka mid ah degree ah Business ama IT ee Dubai dhameystirtay ka hor imanaya in Australia ay u dhameeyaan waxbarashadooda. In 1999, waxa uu ahaa hay'ad ugu horeysay ee ay leeyihiin ajaanib adduunka in la soo saaray ruqsad ka Dowladda Federaalka ah ee dalka Imaaraadka Carabta, oo waxaa rasmi ah u furay sida University of Wollongong, Dubai Campus ee October 2000. si rasmi ah waxaa loo daro sida University of Wollongong ee Dubai ee 2004.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Wollongong ee Dubai ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University of Wollongong ee Dubai on Map
Photos: University of Wollongong ee Dubai rasmiga ah Facebook
University of Wollongong in dib u eegista Dubai
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Wollongong ee Dubai.